Tsy mety ny misy soratra hoe kandida fa mety ny manolotra kandida… - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Samy mba taitra ihany izay nahita an’ity kandida iray nilaza amin’ny haino aman-jery fa voaantso tany amin’ny Cenit. Sahala amin’ireny zaza maditra ireny izay voaantso ao amin’ny biraon’ny Sur-Gé (Surveillant Général izany ho an’izay manadino ny fahazazany) no fahitana izany. Voaantso i Harilala Ramanantsoa satria nasiany soratra hoe “candidate” ny carte de visite-n’ny. “Fampahatsiahivana no natao azy satria tsy fitsarana izahay” hoy ry zareo ao amin’ny Cenit. Manala baraka izany zava-misy izany hoy ny kandida iray.
Ndeha ho lazaina fa diso ity kandida ity nametraka soratra hoe “candidate” amin’iny carte de visite izay fati-na taratasy kely iny. Ny manaitra ary dia ny fahitana amin’ny facebook anarana kandida iray misy io soratra io, izy dia mpanolotsaina ary kandida mirotsaka ao Antananarivo Renivohitra ihany koa. Moa ve ho esorina andaharana ilay lisitra misy io kandida io raha izany ?
Ndeha ho lazaina fa vitsy mpijery izany facebook izany ary tsy ato anatin’ny fari-pifidianana Antananarivo Renivohitra fa any ana habakabaka any. Fa mba ahoana kosa ireo kandida natolotry ny filohan’ny antokony ary naseho televiziona teo ? Aleo tsorina ny ohatra, dia ny antoko Tim izany izay nanolotra ny kandida tao Atsimondrano sy tany amin’ny distrika hafa. Efa notononina hoe kandida imasom-bahoaka izy ireny. Dia ho diso ve ny lisitra iray raha tonga mampahafantatra amin’ny fokontany iray fa kandida ny zanak’izy ireo ka mangataka tsodrano avy amin’io fokontany io mba hahaleo hahalasana izany zanany izany ?
Ary ny an’ilay kandida iraika lahy, efa kandida taloha iny, mba ahoana ? Izy dia nanaovana tam-tam mihitsy fa ny fikambanana Zanaka avy atsy Ananona no manohana azy amin’izao fifidianana ho ben’ny tanàna izao. “Izahay koa mba manana zanaka avy atsy afaka manohana anay” hoy ity kandida iray nahita iny ohatra iny. Tahaka izany koa ireo kandida afaka na sahy mitokana sekoly. “Mba manana sekoly tiana ho tohanana ary tolorana dabilio ange izahay fa noho ny fiezahana hanaraka izay heverina ho ara-dalàna dia tsy manao izany fa miandry tantana” hoy hatrany ity kandida iray ity. “Andraso eo i Paoly” hoy ny mpanohana an’iretsy kandida efa nihetsika voalaza teo aloha. Miandrasa eo ny olona efa milela molotra ianao vao handahatra lovia. “Miaiky aho izay” hoy ny mpitazana. Izao tokoa no tonga amin’ny fiteny hoe “ny marina mitavozavoza dia ho verezin’ny lainga tsara lahatra”.
Ny antoko lehibe manana kandida amin’ny kaominina rehetra anie ka milaza vaovao iray momba ny kaominina iray isan’andro mandritra ny fotoana mialoha ny fisokafan’ny fampielezan-kevitra dia tsy ho azo lazaina fa manao propagandy ho an’y kandida amin’io kaominina io ihany fa ho an’ny kaominina rehetra e. Ka ho esorina andaharana avokoa ve izany ny lisitra rehetra an’ity kandida ity raha ny Hvm manokana no resahana. Satria ny Hvm dia isan’ny antoko mizara tee-shirt na ity akanjo ambony misy ny sary famantarana ny lisitra ho fidiana ity. Iza no mpitsara an’izao raharaha izao ?
Mitandrema ihany, mitandrema hatrany izay no ambetin-tenin-dry zareo ao amin’ny Cenit. Ny voka-pifidianana avoakan’ny fitsarana mahefa no sao lasa ho patsa iray tsy omby vava. Efa nisy anie izany kandida tena nahazo vato betsaka saingy noho izay tsy fanarahan-dalàna izay ka nisy nitory niaraka tamin’ny porofo dia nofoanana ny voka-pifidianana tamin’ny biraom-pifidianana sasany izay nanova ny vokatra farany ary zary naharesy ilay kandida nahazo vato betsaka tamin’ny vokatra vonjimaika. Misy ny ohatra azo tanisaina nandritra ny fifidianana ho solombavam-bahoaka farany teo araka ny filazan’i Fano Rakotondrazaka, mpampaka teny eo anivon’ny Cenit.
Tsapa na inona ho lazain’ny Cenit ho fiarovan-tenany fa tsy mitovy tantana ny misy ireo kandida tsirairay avy na ao Antananarivo Renivohitra izany na amin’ny kaominina hafa. Misy kiririoka tokony hotsofina ao. Misy karatra mavo efa tokony ho nozaraina ary raha mitohy izao dia misy karatra mena tsy maintsy omena. Ho sahy sa tsy ho sahy ?